XOG: Ra’isul Wasaare Cumar oo Mar labaad Khatar ku ah Badda Soomaaliya + Maxaadan Ogeyn oo Dhacaya 5-ta Febraayo? - iftineducation.com
XOG: Ra’isul Wasaare Cumar oo Mar labaad Khatar ku ah Badda Soomaaliya + Maxaadan Ogeyn oo Dhacaya 5-ta Febraayo?
iftineducation.com – Waxaay ahayd bishii Sebtember ee sanadkii 2014 markii aay Soomaaliya dacwadii badda ay u gudbisay Maxkamadda Aduunka.
Maxkamadda ayaa Kenya u qabtay waqti ay dacwadeeda iyo jawaabta dacwada Soomaaliya ugu gudubsato Maxkamadda.
Kenya ayaa gebi ahaanba aanan gudbin jawaab ee waxaa ay gudbisay diidmo hordhac ah oo aay ku doodayso in Maxkamaddu ayna lahayn awood ay kiiskaan ku gasho kiiskuna aanu ahayn mid la ogolaaday. Taasna sharciga ayaa u ogol.
Maxkamadda Hague ayaa Soomaaliya waqti u qabatay ay uga soo jawaabto diidmada Kenya. Waqtiga loo qabtay ayaa ku beegan bisha Febraayo 5, 2016. oo aay ka harsan tahay wax ka yar usbuuc.
Maxkamaddu ayaa joojisay in ay qaado ama fiiriso mudnaanta kiiskaan inta ay go,aan aay ka gaarayso awoodeeda qaadidda kiiska. Waxaa aad muhiim u ah in 5 bisha febraayo aay dowladda JFS aay gudbiso jawaabta ama waqti kororsi weydiistaan, taasina kuma cadda barta internetka ee Maxkamadda oo la soo geliyo qoraal walbo oo kiiska ku saabsan oo leys dhaafsaddo.
Haddii aanay JFS gudbin jawaab kiiska waxaa laga yaabaa in gebi ahaanba la tuuro, taasoo ah sida aay Kenya rabto.
garyaqaano dhinca sharciga badaha ayaa sheegay in haddii kiiska ay maxkamadda soo laasho, waa haddii aanay Soomaaliya ka soo jawaabin diidmadii Kenya, kiiskana la tuuro, in gebi ahaanba waxa la isku hayo iyo damaca Kenya uu adkaan doono in dib Soomaaliya aay mar kale ugu dacwooto lahaanshaha badda Soomaaliya. Kenyana waxaa aay fursad u heleysaa in bixiso ogolaashaha baaritaan shidaal oo hadda ka xayiran.
Garyaqaanada ayaa qaar qaba in tani u egtahay in uu jiro heshiis hoose oo dhex maray Kenya iyo xukuumadda CCC, waayo in jawaab loo diro maxkamadda waxaa ay masuuliyadaas saaran tahay golaha fulinta oo uu CCC R/W ka yahay.
Maxkamad Mareykanka oo xukun xabsi ah ku riday Muwaadin Soomaaliyeed..